Abazali lezingane zesikole cishe ubhekene nesimo lapho ingane akafuni ukuba sifeze izifundo. Ukulungele ukwenza konke kwanoma yini kodwa umsebenzi wesikole. Ngokuvamile lezi zikhathi kuholele izimo ezicindezelayo umndeni. Umama nobaba sebeqala ukukhathazeka, sezinzwa ngakho. Kwakuyintokozo yodwa idluliselwe umntwana, futhi kukhona ukucindezeleka. Odokotela bengqondo ukweluleka ukugwema izimo ezinjalo. Ukuze wenze lokhu, kudingeka azi ukuthi angasilawula kanjani ingane ukwenza izifundo ukuze ukucubungula kwakuthakazelisa futhi zijabulisa. Sidale lonke indlela bese usetha wezinyathelo, okuzoxoxwa ngayo kulesi sihloko.
Ungabi ibanga sorry
Abazali abaningi bahlushwe umbuzo: "? Uyithola kanjani ingane ukwenza izifundo" Khumbula ukufundisa umntanakho umsebenzi wesikole ngaphandle usinga kumele kube ekilasini lokuqala. Zisuka nje udinga ukwenza kucace enganeni yakho ukuthi inqubo yokufunda uqalile, futhi manje yena unalo isabelo saziso, okumelwe sibhekane bebodwa.
Kubazali, kubalulekile ukulungiselela ubuye utetayete imvuthu esigabeni esisha ekuphileni kwakhe. Ngisho ngamaholide kufanele ahlele endaweni lokufeza izifundo, ulungise imodi. Ngemva kwenqubo yokufunda uqalile, kumele:
Hang ikhalenda esikoleni endaweni egqamile, enganeni kungenzeka isimiso sakhe. Qiniseka ukuthi ufake evakashele amaqembu kanye nezigaba. Kulaba bantu ababili bokuqala ingane ayikwazi ukwenza ngaphandle kosizo kwabazali. Akubalulekile ukunquma konke ingane. Thatha ipeni notebook, yenza iplani enemininingwane ekhombisa isikhathi sokwenza umsebenzi wesikole wasekhaya, uhamba ngaphandle, ukubukela i-TV, idlala imidlalo yama-computer.
Abaziphathi nanini izibhamu izifundo ingane. Ngisho noma unento akusebenzi, kungcono waphinda ukuchaza imithetho, imibuzo eholela empendulweni, ukusikisela, ukuphakamisa.
Zama banamathela umbuso nsuku zonke, intombazane ngaleso sikhathi abahilelekile. Namathela isheduli nje ezimweni ezinzima (izinkinga zezempilo, ibhizinisi esiphuthumayo, nokunye).
Chazela ingane yakho ukuthi isikole - kuwumsebenzi. Futhi kuphela sincike kuyo, siyoba yini umphumela.
Ngokuvamile abazali ngilihawukele lokuqala ibanga, abababheka njengezinto ezincane. Kodwa le nqubo yokufunda yakhiwe ngendlela yokuthi uyakucabangela bonke ubudala izingane kungenzeka. Ungakhathazeki futhi sicabange ngalokho ingane yakho esetshenzwa ngokweqile, ngoba uma ezinsukwini zokuqala ukuqeqeshwa akazange afundise abafundi njengemsebenti wasekhaya, qiniseka vela esikhathini esizayo, umbuzo indlela yokwenza ingane benze imisebenzi yesikole yasekhaya.
Okusalungiswa - umngani wakho
Uma ingane eqala ukuya esikoleni, umbuzo ophakamayo, kufanele ixoxe kanjani umsebenzi wesikole. Othisha ukuncoma ukusetshenziswa esiyisibopho okusalungiswa. Lokhu kungasindisa isikhathi ingane. Bhala eseyi, izibonelo ukuxazulula kanye nemisebenzi kufanele zibe notebook ehlukile. Ngemva kwalokhu-ke kuyadingeka ukuba abazali ukuhlola ebhaliwe. Kwaze kwaba yilapho sebeshiye ukuthi badluliselwe ku ikhophi ahlanzekile.
Ngo ingane okusalungiswa ungakwazi ukulungisa amaphutha, ungaceli kabusha izikhathi eziningana. Ngenxa yalesi futhi kudingeka lokhu notebook.
Ukuphendula umbuzo mayelana nokuthi ungakwenza kanjani izifundo kanye nengane kufanele aqondiswe imithetho nezazi zokusebenza kwengqondo bakhumbule ukuthi izindlebe zezingane kungukuthi plodding ngokusebenzisa grade 5, ukunakwa ukuphazanyiswa. Ngemuva kwemizuzu engu-20-30 ukuqaliswa izifundo kuwufanele ukwenza okuncane zemizuzu emihlanu ikhefu. Iphutha abazali - hhayi ukuvumela izingane aphume etafuleni amahora 2-3.
Kungani ingane akafuni ukwenza umsebenzi wesikole. Sithola izizathu
Izingane eziningi ungezwa ibinzana bengafuni ukuthi wenze umsebenzi wesikole ekhaya. Kulesi simo, nawu umbuzo esinengqondo: "kanjani uthola ingane ukuba benze imisebenzi yesikole yasekhaya ngaphandle amahlazo?" Okokuqala udinga ukuthola izizathu ngalo enqaba ukuhambisana nabo. Empeleni, lezi akuzona kangaka:
ubuvila Yemvelo. Ngeshwa, kunezingane ngubani ngilugcinile into enjalo. Kodwa ambalwa kakhulu kubo. Uma wazi ukuthi ezinye izinqubo (izincwadi ukufunda, game ethokozisayo, ukubukela opopayi, ukudweba, njll) isikhathi eside wathumba ingane ke inkinga ngokusobala awavumelani ubuvila.
Besaba ukwehluleka. Lona omunye izizathu ezijwayeleke kakhulu, ikakhulukazi uma ngaphambi ukuthi kunezimo lapho abadala baziphathe ngendlela engafanele. Ake sithi uthisha esiqinile amthethise kwalo lonke ikilasi ngenxa iphutha, noma abazali amthethise ngoba uphawu olubi. Zibophezele izenzo ezinjalo engenakwenzeka. Kungenjalo-ke sizothinta ngiyoqeqeshwa ngokwengeziwe nasekuthuthukeni ingane.
Umntwana hhayi yingcweti ngokugcwele isihloko. Le nkinga ngokukhethekile ukuze ahlekise lokuqala ibanga nabafundi basesikoleni esiphakeme. Kuyadingeka futhi enza konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuthi ingane iqonde into.
Ukuswelakala kokusebenza ngokuhlanganyela ababelethi. Kunengqondo, njengoba izifundo sokungalandeli umthetho kungenziwa ssopryazheno umama ngothando nobaba? Izazi zokusebenza kwengqondo ziye atholakala kule isixhumanisi esiqondile. Ngakho izingane zivama ukuba amehlo futhi kubangele imizwa okungenani abanye. Ngokuvamile, izimo ezinjalo zenzeka imindeni nalabo abayimilutha yomsebenzi. Out of lo mlando eyodwa - kaningi ngangokunokwenzeka ukuze udumise izinyane bathi ukuthi uyaziqhenya ngaye.
Inqubo ngokwaso kubonakala ingane ungakujabulisi, ikakhulukazi lokuqala ibanga, asetshenziswa ngubani ukuthatha amakilasi kuphela ngesimo imidlalo. Umsebenzi abazali nothisha - indlela ukuzivumelanisa izingane zifunde ngokushesha.
Ngaphambi ubuza umbuzo, indlela yokufundisa ingane ukuba benze imisebenzi yesikole yasekhaya, kumelwe uthole ukuthi isizathu yena enqaba ukwenza umsebenzi wesikole. Uma ungeke ukwazi ukusingatha uwedwa, kufanele ufune usizo kusuka onguchwepheshe. Ngeke ukuncoma ukuhlela umhlangano womndeni, futhi kakade bakhona ukuxoxa imbangela kungenzeka futhi sekungavumi wengane ukufunda. Futhi lapha into esemqoka - ukuthola wesithunywa esifanele abadala: Ungakhali, futhi ngokwakhayo bahlanganyele inkhulumomphendvulwano.
Kuthiwani uma ingane akaqondi isihloko
Nge zonke izinkinga ezibalwe ngenhla ukwehluleka izifundo abazali abangazifunda ukubhekana bebodwa. Kodwa kuthiwani isimo lapho ingane nje akaqondi isihloko, bese-ke kunikezwa uyazidlalela? Odokotela bengqondo bathi le nkinga abantu abadala anqume bebodwa, umane ngokwenza imisebenzi kunzima ezinganeni. Kanjeyana they okwengeziwe senze isimo sishube.
Okuwukuphela isinqumo esifanele - ukuqasha uthisha noma umfundisi. Kufanele engawayekanga imali izifundo ezimbalwa nje yangasese ukusiza ingane yakho ziphathelene isihloko nzima.
Ingabe udinga usizo ekufundeni izifundo?
Ezinye izingane benza konke okusemandleni abo ukuze asule ngokwabo wemfanelo ukuqaliswa izifundo. Ukuze wenze lokhu, sengathi begula, abasebenza ngokweqile nabacindezeleke, abazali bayacelwa ukubasiza. Yiqiniso, bavumelana, kodwa abaqapheli ukuthi ingane ubamba kubo "nenhlanzi ebanjwe". Kuwufanele izikhathi eziningana ukuba sinqotshwe iqhinga, futhi leli qhinga izosebenza ngokuqhubekayo.
Ukuze siphendule umbuzo kanjani ukufundisa ingane ukuba benze umsebenzi wabo wasekhaya bebodwa, ezimweni ezilandelayo kumele ihlaziye:
kangaki zokungcebeleka ingane ukuba usizo lwakho;
esingakanani kokuba ehluphekile;
Uma ngokuvamile asebenzise usizo lwakho, ne kancane egula, kodwa namanje ofunda esikoleni esiphakeme, udinga nje ukuyichazela ukuthi umsebenzi wesikole kusukela manje senza wedwa. Kodwa ngaphambi Esimweni esinjalo akukuhle ukuhola, futhi ekilasini lokuqala ukuqeqesha ingane ukwenza umsebenzi wami wesikole.
Fundisa ingane ukuba nokwaneliswa
Umbuzo kanjani ukuthola ingane ukuba benze imisebenzi yesikole yasekhaya ngokuzimela, liphuma abazali bazo njalo ngokwanele. Uma usebenzisa i-umfundi omdala namanje ngandlela-thile uzama ukuxazulula inkinga, bese omunye akakwazi ukubhekana. Ngenxa yalokhu, zenzeka eziyihlazo zokufumbathiswa ngokuxabana, okwenza kukhule isimo kuphela.
Okokuqala, umuntu okufanele azame achazele ingane ukuthi eminye imfundvo lephakeme incike izifundo zakhe. Impumelelo kangcono futhi, cishe ukuze singene isikhungo ehlonishwayo. Asilokothi izifundo umfundi. Ubuningi yini ongayenza - chaza ngomthetho othile.
Akubalulekile ukuba sihlale njalo siqaphele inqubo, kwanele ukuba uhlole okusalungiswa nekhophi ahlanzekile. Okuwukuphela kwendlela ukuthuthukisa ukuzimela ezinganeni. Kuyadingeka ukuqala izinsuku lokuqala esikoleni, bese esikhathini esizayo ngeke abe kuphakama umbuzo: "? Kanjani ukufundisa ingane ukuba benze umsebenzi wabo wasekhaya bebodwa"
Ingabe ngidinga ukusicabangela imali?
Muva nje, phakathi abazali of indlela entsha ukukhuthaza izingane emabanga kahle esikoleni. Esikhathini isenzo imali njengoba umklomelo. Ngakho, bakholelwa ukuthi umfundi izozama nzima, ukuze ngokuzimela afeze izifundo. Izazi zokusebenza kwengqondo ezithi ukuthi lokhu kuyiphutha elikhulu. Phakathi kwabazali nezingane ngalesi yobudala akufanele kube ubuhlobo zezimali.
Ziningi izindlela ukuthola ingane ukuba benze umsebenzi wabo wasekhaya ngaphandle izinyembezi futhi iconsi. Umuntu udinga kuphela ukuba sithole amandla nokubekezela. Ngemva kwesikhathi esikoleni - isikhathi kunalokho nzima, ikakhulukazi lokuqala ibanga.
Njengoba isisusa, mhlawumbe uthathe uhambo oluya isekisi, imidlalo yaseshashalazini, umdlalo isikhungo. Kuyinto efiselekayo ukuthi abazali isikhathi abasichitha nezingane zabo. Kanjeyana they eminye ukusungula oxhumana.
Abazali abaningi ukubuza odokotela bengqondo: "kanjani uthola ingane ukuba benze umsebenzi wabo wasekhaya bebodwa?" Ukusebenzisa izindlela nogqozi. Kodwa engamukeleki cash imiklomelo. Phela, esikhathini esizayo abantwana bakwa-zonke izenzo zakhe ezinhle kanye nemiklomelo kuzodinga sengiprofethile amanothi.
algorithm umsebenzi wesikole
isikhathi School - Adalberto isikhathi nzima izingane nabazali bazo. Kusukela isidingo sengane ukuba bazibuse, izinto njengomuntu ohluzekile, balandise ngezenzo zabo. Abafundi ngokuvamile (ikakhulukazi lokuqala ibanga) senqabe afeze izifundo, noma ukwenza kanjalo ne ukwenqena okukhulu. Lokhu kuba imbangela ingxabano. Ngokuvamile abazali ungezwa le nkulumo kanje: "Indlela ukufundisa ingane yakho ukwenza umsebenzi wesikole sabo bebodwa" ukuze inqubo 'sasifana clockwork "futhi akazange abangele noma ibuphi ubunzima, kufanele wazi futhi uhambisane nemithetho elandelayo:
Ngemva ingane ifike ekhaya ivela esikoleni, musa nje amenze ahlale ngokuba ukuqaliswa izifundo. Isikimu Okulandelayo elilungile: uhamba emoyeni, idina, ukuphumula imizuzu engu-30.
Isikhathi esingcono kakhulu sokuba umsebenzi wesikole kusukela 15.00 kuya 18,00. Lokhu kungase kutholakale ngochwepheshe. Iwashi idatha umbonile kahle enkulu yobuchopho.
Qaphelisisani imodi. Zama ukwenza imisebenzi esikhathini esifanayo.
Zama ukukhetha ilungelo izinto eziyinkimbinkimbi, bese udlulela ukukhanya okuningi.
Akubalulekile ukuba sihlale njalo siqaphele ingane. Mfundise ukuba nokwaneliswa. Okokuqala, ake enze umsebenzi ifomu okusalungiswa, uyoletha isivivinyo, bese idlulisela idatha ikhophi ahlanzekile.
Emva kokuba ingane iqede ngomsebenzi wesikole, ungakhohlwa ukuba simdumise.
Ukuze babe ukungabaza ukuphoqelela ingane ukwenza izifundo, ukugcina imithetho ngenhla kanye nezincomo.
USotswebhu noma isanqante?
Odokotela bengqondo babhekana nezimo lapho ingane uvaliwe ngokwayo, iyeke ukuqonda kubazali, kubonakala sengathi izomiswa nezwe futhi uthole ukuthula kwengqondo kulezi imidlalo ye-computer. Kungani lokhu kwakwenzeka? Kubo bonke iphutha - ukuziphatha okungalungile abantu abadala, abantu abamukelekayo ngezithukuthuku izingane.
Abaningi bayaqiniseka ukuthi indlela engcono kakhulu yokuthola ingane ukwenza okuthile - ukukhombisa inzuzo yayo. Lokhu ingatholakala ngengila noma umkayo. Lesi sikhundla akulungile. ukuphathwa Mnene kwezingane, isikhuthazo udumo - lokho isihluthulelo sempumelelo. Kuyefana nasendleleni umsebenzi wesikole.
Ngokuvamile, uyakwazi ukuzwa ibinzana ukuthi ingane enqaba ukwenza umsebenzi wesikole. Mhlawumbe isizathu itholakala lokuthi abazali azilungile ukuziphatha abafundi. Kubalulekile ukuba banamathele le mithetho elandelayo:
Lapho ehlola umsebenzi wesikole neze waphakamisa izwi lakhe, ningabizi futhi athobise izingane. Ukuze uqale nge udumo ingane ukuthi izifundo uyalingana. Futhi kuphela ke baqala ibonisa iphutha uma zingeniswe.
Ukulinganisa - "nesineke" nesihloko abazali abaningi. Phela, ngokuqinisekile kwakungeke kube efiselekayo ukuthi ingane yakho iye yaba engcono. Futhi indlela okudina ngezinye izikhathi ukuzwa ibinzana ukuthi ingane akuyona phezulu kumsebenzi futhi wathola amamaki ukwehluleka ukwenza. Zama ukukhuluma buthule kanye nabafundi, chaza ukuthi isihluthulelo sempumelelo esikhathini esizayo - atholwe isizinda solwazi.
Ukuze uphendule lo mbuzo, kanjani izifundo nengane ngaphandle bamemeza, udinga ukukhumbula okulandelayo: Umuntu ngamunye - umuntu, ne uhlamvu yayo siqu, musa ukuwuchitha. Ukululazeka, yamemeza yathi: amagama ayinhlamba kuyonezela isimo, futhi abazali ulahlekelwe isithunzi sabo emehlweni ingane.
Imithetho eyisisekelo udinga ukukhumbula abazali
Kukhona ezinye ziqondiso ezilula ukuthi ukweluleka ukusebenzisa abezenhlalakahle, ucabangela umbuzo kanjani ukufundisa ingane ukuba benze umsebenzi wabo wasekhaya:
Ningaphendukeli into the game.
Ngaphambi kokuthi uqale yimiphi imisebenzi yesikole yasekhaya, nika ingane yakho ukuphumula. Kufanele kube fresh futhi esebenzayo, kungenjalo ulwazi is hhayi wafunda.
Khuthaza ingane yakho ukuba zizimele kusukela ekilasini lokuqala.
Yenza schedule for izifundo. Kwenze ndawonye nezingane zabo, kufanele ngqo abahilelekile.
Ungakhohlwa mayelana nesijeziso sazo bokuhlukaniswa imidlalo ye-computer, i-TV. Ukuhamba emoyeni opholile asikwazi iyakwenqabela, umfundi kufanele thikazisa izifundo zabo. Street - indawo efaneleka kakhulu yokwenza lokhu.
Ungalokothi uphakamise izwi lakho ngenxa izilinganiso abampofu.
Uma leyo ngane izokwazi akakwazi ukubhekana nesimo, zama ukuthola imbangela. Kuyinto engenakwenzeka zenzele wena, esazini.
Yehlisa umoya futhi ukubekezela.
Ukusetshenziswa amandla ento edaliwe akwamukeleki.
Chazela ingane yakho ukuthi ukufunda kuhle imfashini kakhulu ezweni lanamuhla. Imfundo - isihluthulelo umsebenzi ophezulu esikhathini esizayo.
Abazali abaningi bayabuza: "Uma ingane akusho ukufunda izifundo ukuba benzeni?" Okokuqala sidinga ukuthola isizathu sokuthi kungani lokhu okwenzekayo. Mhlawumbe ilula - yokuntuleka iqondakale. Uma kunjalo, udinga ukusiza ingane yakho baqasha komfundisi.
Ukwakheka kwamakhemikhali ubisi
Kanjani ukubonisa usawoti amalunga omzimba? Ukudla okungcono kwemithi, amakhambi abantu